Jimco, Nofeembar 2, 2012 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
Haddii aad ku qanacdo iyo haddii kaleba, Google waxay leedahay garoon lagu ciyaaro oo ay qasab tahay inay suuqyadu ka shaqeeyaan. Haddii ay tahay xayeysiis lacag lagu siinayo Google ama ku-meelaynta aaladda mashiinka raadinta, waxaa laga yaabaa inaad dhayalsanayso gaadhista Google. Tilmaamahan ka soo baxa 'Wordstream' wuxuu dhammaantood u dhigayaa aragti.
From Xaqiiqda Google ee ku saleysan xaqiiqda: Baadhitaankeena ku saabsan infographic waxaa ka mid ahaa in ka badan 2,600 oo akoonada AdWords ah oo ka socday AdWords Grader-ka Q3 2012. Xisaabaadka wadar ahaan waxay matalayeen in ka badan $ 250 milyan sanadkii. Waxaan lahaan jirnay xisaabaad badan oo kharash ah; xisaabaadka qaar aad ayey u yaraayeen, iyagoo ku kharash gareeya $ 100 bishii AdWords. Qaar kale aad ayey uga ballaarnaayeen, iyadoo qaarkood ay ku qarashgareyn jireen malaayiin bishii bishii AdWords. Falanqeyntu waxay eegtay xisaabaadka dhammaan warshadaha, waxayna ka timid dhammaan waddamada Google ku ganacsado.
Xogta ku saabsan boostada blog-ka waxay ka timid daraasadda ugu dambeysay ee Wordstream Tirakoobka websaydhka Google, taas oo aan u tixgelinayno mid ka mid ah daraasadihii ugu dhammaystirka badnaa ee ku saabsan shaqaynta gudaha ee Xayeysiisyada Google ee abid la qabtay.
Tags: xayeysiiska googlegoogle ppcgoogle seogoogle +raadinta dabiiciga ahBixi halkii gujiayna search engineSEO
Nov 3, 2012 at 1: 32 AM
Thnks ee loogu talagalay faahfaahinta macluumaadka. Ma filayo in websaydhka wax iibsiga / e-commerce uu soo horeeyo. Waxa aan filayo waa in e-commerce uu yimaado marka hore marka loo eego warshadaha safarka.